Ukuthengisa Kwezenhlalo Kume kanjani Ngokukhangisa Kwendabuko | Martech Zone
NgeSonto, ngoJuni 22, i-2014 NgoMsombuluko, Okthoba 12, 2015 Douglas Karr
Angiphikisani nakancane nokukhangisa nokukhokhela ukunyuswa, kepha abaninimabhizinisi abaningi ngisho nabathengisi abathile abawuhlukanisi umehluko. Imvamisa, ukumaketha komphakathi kubhekwa njengokunye nje isiteshi. Yize kuyisu elengeziwe ukwengeza ekumaketheni kwakho, ukunikezwa kwezenhlalo ithuba elihluke kakhulu.
Imithombo yezokuxhumana ibilokhu iphazamisa indawo yezokukhangisa selokhu yaqhamuka endaweni yesehlakalo futhi yanikela ngamamethrikhi alandelanayo abakhangisi abaphupha ngawo kuphela. Njengoba inani elinyukayo le-UGC lishicilelwa nsuku zonke, akungabazeki ukuthi ukumaketha kwezenhlalo kuyisisekelo esibalulekile sokukhangisa okuqondisiwe, ukukhiqizwa kokuhola kanye nokubandakanya izindlela ezimbili. IBrightkit, Ungayishayela Kanjani inani nge-Social Marketing
Ukukhangisa ngokuyinhloko kuyisu lokuqwashisa, hhayi isu lobudlelwano. Angikwazi ukuphendula ngqo kumkhangiso wethelevishini noma womsakazo… noma isikhangiso sedijithali online. Kepha ngiyakwazi ukusabela, ukunanela noma ukuphendula ekukhangiseni komphakathi. Imithombo yezokuxhumana inikeza izindlela ezisebenza kahle kakhulu neziphumelelayo zokusiza ukumaketha ngomlomo emlandweni - futhi inkampani yakho kufanele ukuthi ikungenele. Futhi, lapho uxhaso lwakho lomkhankaso selomile, nezikhangiso zakho ziyoma. Kepha okuqukethwe okwabiwe ezinkundleni zokuxhumana kungahlala iminyaka.
Tags: ukuqonda komthengiamapulatifomu edijithaliimeyiliFacebookizikhangiso ze-googleinstagramukumaketha okuhlanganisiweukuhola isizukulwaneumncintiswano wokumakethaukufinyelela ngobuningiamamethrikhi alinganiswayoPinterestseookuqukethwe okwabelwanayoukumaketha komphakathiumncintiswano wokumaketha umphakathiukufinyelela komphakathiukukhangisa okubhekisweukukhangisa kwendabukoTwitterukubandakanyeka kwezindlela ezimbiliokuqukethwe okubukwayoisizukulwane sokuhola esifudumele
Isimo Samanje Sokumaketha Okuqukethwe 2014